मग्मगाउँदो व्यक्तित्व, अमर्यादित व्यबहार (भिडियो रिपोर्ट) | Kendrabindu Nepal Online News
मग्मगाउँदो व्यक्तित्व, अमर्यादित व्यबहार (भिडियो रिपोर्ट)
१ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १५:५५
चिल्लो मुहार, इन्टरनेशनल स्ट्याडर्डको लवज, शरिरमा सुट–टाई, मग्मगाउँदो पर्फ्युम, महंगा कारमा सवार । राजधानी काठमाडौंको फाइभस्टार होटल हायात पुग्दा जो कोहीलाई लाग्न सक्छ यहाँ पक्कै पनि भिआइपी र भिभिआइपीहरुको जमघट चलिरहेको छ । तर होइन, उनीहरु आम नेपाली नागरिक नै हुन् तर विदेश बसेका ।
उनीहरु नै हुन् जो नेपालमा यो भएन, त्यो भएन, विदेशमा भए यस्तो हुन्थ्यो, त्यस्तो हुन्थ्यो, यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ आदि इत्यादि भनेर सामाजिक सञ्जालमा अर्ति उपदेश र आक्रोश पोख्नेहरु ।
तर असोज २८ गतेदेखि जारी एनआरएनए सम्मेलनमा सहभागिहरुको बाहिरी व्यक्तित्व जति शानदार देखिएपनि भित्रि वास्तविकता भने यसपटक छर्लंगै पोखियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट शुरु भएको रमीता होटलको कुर्सी तोडफोडदेखि मुख छाडाछाड र हात हालाहालको अवस्थासम्म पुगेपछि प्रहरीले लाठी बर्साउन पर्‍यो ।
गैरआवासीय नेपाली संघमा मौलाउँदै गएको राजनीतिक लफडा पनि नवौं सम्मेलनमा आइपुग्दा छताछुल्ल पोखियो । चरम राजनीतिक गतिविधि र चाराने कार्यकर्ता शैली त उनीहरुको परिचय नै भइसकेको देखिन्छ ।
एनआरएनएका प्रतिनिधिहरुले यस पटक देखाएको चर्तिकलाले निकै चर्चा पायो। त्यसैले पनि होला नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुमार पन्तले अबदेखि नेपालमा एनआरएनए सम्मेलन नगर्ने बाचा गरेका छन् ।
के के उपद्रो मच्चाए त एनआरएनएका प्रतिनिधिहरुले ?
Prevकाठमाडौंमा ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र’ स्थापना
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दैNext
एनआरएनएमा सत्तारुढ नेकपाको वर्चस्व, कसले कति मत ल्याए ? (विस्तृत)
एनआरएनएको मतगणना अन्तिम चरणमा, पन्त अगाडि
‘एनआरएनए’को चुनाब आज, एक घण्टाभित्र नतिजा
एनआरएनए विश्व सम्मेलन मंगलबारदेखि, कुमार पन्त र कुल आचार्यको भिडन्त (प्यानलसहित)